iPicar: afeno ny code iMessage miaraka amina kaody | Vaovao IPhone
Efa naniry ve ianao afeno ny resaka iMessage mivaingana? Eny tokoa. Ara-dalàna raha misy resaka resadresaka takiana amintsika satria tsy miankina loatra izy ireo. Ary ahoana raha azo afenina izy ireo rehefa manokatra ny iPhone? Aleo noho ny tsara kokoa. iPicar dia sioka Cydia izay ahafahantsika manao izany.
Rehefa mametraka iPicar isika dia tsy maintsy ampifanarahintsika aminy. Ny fanamboarana dia tena tsotra ary ampy ny manondro kaody sasany Hampiasaintsika ny mahita ny resadresaka rehetra sy manafina izay tadiavintsika ary ny resadresaka (avy amin'ny fifandraisana izaitsizy) tianay hanafina.
Amin'ny fotoana voalohany hampiasantsika iPicar, handeha any amin'ny toerana misy azy izahay. Ao amin'ny sehatra dia hahita toerana roa hametrahana ny kaody isika. Manolo-kevitra ny hametraka ny kaody mahazatra antsika amin'ny habaka etsy ambony. Etsy ambany no hametrahantsika ny kaody "majika" izay hanary ny resatsika mora tohina kokoa. Ao amin'ny "Contacts" dia azontsika atao ny mampihetsika na mampiato ny fifandraisana izay tiana haseho antsika rehefa mametraka ny kaody faharoa izay namboarinay teo aloha isika.
Raha efa voalamina dia afaka mamoha ny iPhone amin'ny alàlan'ny kaody mahazatra isika, ahafahantsika mahita ny resaka rehetra, na mampiasa ny kaody faharoa, izay hanokatra ny iPhone ihany koa, fa kosa hanafina ireo resaka izay tsy tiantsika hisy hahita.
Tsara raha iPicar dia mifanaraka amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa toy ny WhatsApp na Telegram. Ho an'ny mpampiasa any Etazonia dia mety ho tsara tokoa ity tweak ity, satria be mpampiasa kokoa ny iMessage ao, saingy manokana tsy mampiasa iMessage amin'ny olon-kafa aho satria tsy manana fifandraisana mampiasa azy io. Mety ho azo atao izany amin'ny ho avy.
mifanentana: iOS 8
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » iPicar: afeno ny resaka iMessage rehefa manokatra ny iPhone
Ny kinova ho an'ny whatsapp dia ho hita amin'ny faran'ny herinandro
Fampiharana fanovana an-tsoratra iPhone / iPad 10 ambony